Chatbot - ဝီကီပီးဒီးယား
တစ်ဦးက chatbot (လည်း talkbot အဖြစ်လူသိများ, chatterbot, အောက်ခြေ, IM bot, အပြန်အလှန်အေးဂျင့်, ဒါမှမဟုတ် Artificial စကားပြောဆိုမှု Entity) ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်သို့မဟုတ်အာရုံသို့မဟုတ်စာသားနည်းလမ်းများမှတဆင့်စကားပြောဆိုကျင်းပသည့်အတုထောက်လှမ်းရေးဖြစ်ပါသည်။  ထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များကိုမကြာခဏခိုငျလူသားတစ်ဦးဖြင့် Turing စမ်းသပ်ဖြတ်သန်းတစ်ဦးစကားပြောဆိုမှုမိတ်ဖက်အဖြစ်ပြုမူမယ်လို့ဘယ်လောက်တူအောင်ဖန်တီးရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ Chatbots ပုံမှန်အားဖြင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ဝယ်ယူအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောလက်တွေ့ကျရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပေးတဲ့ dialog စနစ်များအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ တချို့က chatterbots ခေတ်မီသဘာဝဘာသာစကားအပြောင်းအလဲနဲ့စနစ်များကိုအသုံးပြုပေမယ့်အများအပြားရိုးရှင်းတဲ့စနစ်များကိုဒေတာဘေ့စကနေအများဆုံးကိုက်ညီခြင်းသော့ချက်စာလုံးတွေနဲ့ပြန်ကြားချက်, သို့မဟုတ်အရှိဆုံးအလားတူအသုံးအနှုန်းပုံစံ, ဆွဲထုတ်ဖြစ်လျှင်, input ကိုအတွင်းသော့ချက်စာလုံးများများအတွက် scan ။
အဆိုပါဝေါဟာရကို "ChatterBot" မူလကဤစကားဝိုင်းများအစီအစဉ်များကိုဖော်ပြရန် 1994 ခုနှစ်မိုက်ကယ် Mauldin (ပထမ Verbot ဂျူလီယာ၏ဖန်ဆင်းရှင်) ကစတင်သုံးစွဲခဲ့သည်။  ယနေ့အများဆုံး chatbots ဖြစ်စေထိုကဲ့သို့သော Facebook Messenger သို့မဟုတ် WeChat အဖြစ်စာပို့ခြင်း apps များကနေတစ်ဆင့်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီအဖှဲ့အစညျးမြား '' apps များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတဆင့်, ထိုကဲ့သို့သော Google ကလက်ထောက်နဲ့ Amazon Alexa အဖြစ်ကို virtual လက်ထောက်ကနေတဆင့်ဝင်ရောက်နေကြသည်။   ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Chatbots ထိုကဲ့သို့သော (ချက်တင်ကနေတဆင့် e-commerce) စကားပြောဆိုမှုစီးပွားကူးသန်းအဖြစ်အသုံးပြုမှုအမျိုးအစားသို့ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု, ဆက်သွယ်ရေး, ဖောက်သည်ထောက်ခံမှု, ဒီဇိုင်း, ဆော့ဖ်ဝဲရေးကိရိယာများ, ပညာရေး, ဖျော်ဖြေရေး, ဘဏ္ဍာရေး, အစားအစာ, ဂိမ်း, ကျန်းမာရေး, HR, ဈေးကွက်, သတင်း, , ကုန်ထုတ်လုပ်မှု, ဈေးဝယ်, လူမှုရေး, အားကစား, ခရီးသွားလာခြင်းနှင့် utilities ။ 
1950 ခုနှစ်, အလန်ကျူရင်ရဲ့နာမည်ကျော်ဆောင်းပါး "ကွန်ပျူတာစက်နှင့်ထောက်လှမ်းရေး" ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်,  ယခုထောက်လှမ်းရေးတစ်ဦးစံအဖြစ် Turing စမ်းသပ်မှုဟုချေါသညျအဘယျသို့အဆိုပြုထားရာ။ ဤသည်သတ်မှတ်ထားလုံလုံလောက်လောက်ကောင်းစွာတရားသူကြီးယုံကြည်စိတ်ချရသော-အပေါ်တစ်ဦးတည်း-ကြားရှိအစီအစဉ်စကားပြောဆိုမှုအကြောင်းအရာ၏အခြေခံခွဲခြားနိုင်ခြင်းကြောင်း, တစ်ဦးကလူ့တရားသူကြီးတစ်ဦးကို real-time ကျမ်းစာ၌ရေးထားစကားပြောဆိုမှုအတွက်လူ့အယောင်ဆောင်တစ်ဦးကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များ၏စွမ်းရည်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်နှင့် တကယ့်လူ့။ Turing ရဲ့အဆိုပြုစမ်းသပ်မှု၏ကျော်ကြားမှုသူတို့တစ်တွေစစ်မှန်သောလူ့နှငျ့စကားပွောခဲ့ယုံသို့အသုံးပြုသူများကိုအရူးနိုင်တော့မည်ပုံရသော 1966 ခုနှစ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေယောသပ်သည် Weizenbaum ရဲ့အစီအစဉ်ကို Eliza, ၌ကြီးသောအတိုးနှိုးဆွ။ သို့သော် Weizenbaum ကိုယ်တော်တိုင် Eliza စစ်မှန်စွာအသိဉာဏ်ခဲ့ကြောင်းဆိုကြသည်ဘူး, သူ၏စက္ကူဖို့နိဒါန်းပို debunking လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်တင်ဆက်:
[ခုနှစ်တွင်] အတုထောက်လှမ်းရေး ... စက်တွေကိုတောင်အရှိဆုံးအတွေ့အကြုံရှိလေ့လာသူ dazzle ဖို့မကြာခဏလုံလောက်သောအံ့ဘွယ်သောအကျင့်တို့ကိုထဲမှာပြုမူစေလျက်ရှိသည်။ ယင်း၏အတွင်းပိုင်းအလုပ်လုပ်ရှင်းပြထားသည်တစ်ချိန်ကသို့သော်အထူးသဖြင့်အစီအစဉ်ကိုက၎င်း၏မှော်ကွာ crumbles ... unmasked ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်က; ကလုပျထုံးလုပျနညျးတစ်ဦးမျှသာစုဆောင်းမှုအဖြစ်ထင်ရှား ... အဆိုပါလေ့လာသူ "ငါရေးထားပြီနိုင်ကြောင်း" သူ့ကိုယ်သူပြောပါတယ်ဆိုလိုတာပါ။ သောသူမူ curios အဘို့သိုထားကြောင်းမှ "အသိဉာဏ်" မှတ်သားစင်ကနေမေးခှနျးအတှကျအတွက်အစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆျောထင်နှင့်အတူ ... "ကရှင်းပြသည်" ဒီစက္ကူအဆိုပါအရာဝတ္ထုဖြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်ရုံထိုကဲ့သို့သော Re-အကဲဖြတ်ဖြစ်ပေါ်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ အနည်းငယ်အစီအစဉ်များကိုအစဉ်အဆက်ကပိုလို။ 
(အစဉ်အဆက်ကတည်းက chatbot ဒီဇိုင်နာများအားဖြင့်ကူးယူ) စစ်ဆင်ရေး၏ Eliza ရဲ့သော့ချက်နည်းလမ်းကိုပါ (input ကိုအတွက် cue စကားလုံးများကိုသို့မဟုတ်စာပိုဒ်တိုများ၏အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်တစ်ဦးပုံအဓိပ္ပါယ်ရှိသောလမ်းအတွက်ရှေ့ဆက်ပြီးစကားလက်ဆုံရွှေ့နိုင်သော Pre-ပြင်ဆင်ထားသို့မဟုတ် Pre-ပရိုဂရမ်တုံ့ပြန်မှုသက်ဆိုင်ရာ၏ output ကပါဝင်ပတ်သက် နှုတ်ကပတ်တရားတော် '' ME သင့်မိသားစုအကြောင်းပြောပြ '' နှင့်အတူ '' မိခင် ') များပါဝင်သည်ဆို input ကိုတုံ့ပြန်ခြင်းဖြင့်ဥပမာ။  ထို့ကြောင့်နားလည်မှုတစ်ခုထင်ယောင်ထင်မှားပါဝင်အပြောင်းအလဲနဲ့မျှသာအပေါ်ယံခဲ့သော်လည်းထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Eliza လူ့တရားသူကြီးတွေစကားပြောဆိုမှုတုံ့ပြန်မှု "အသိဉာဏ်" အဖြစ်အနက်ခံနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်အခါသံသယ၏အကျိုးခံစားခွင့်ပေးစေခြင်းငှါဒါအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောထင်ယောင်ထင်မှား, generate မှအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်လွယ်ကူပါတယ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
interface ဒီဇိုင်နာများကအမှန်တကယ်မဟုတ်ဘဲရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံ-ကိုက်ညီခြင်း-နိုင်ပါတယ်အသုံးဝင်သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အမြတ်ထုတ်ခံရအပေါ်အခြေခံပြီးသောအခါလူသားမြားသညျ '' စေတနာအဖြစ်စစ်မှန်စွာစကားပြောဆိုမှု-ပင်ကွန်ပျူတာ output ကိုအနက်ကိုဘော်ပြမှသဘောပေါက်နားလည်လာကြပါပြီ။ လူအများစုဟာလူ့-ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ပရိုဂရမ်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုနှစ်သက်, ဤ chatbot-စတိုင်နည်းစနစ်နေသမျှကာလပတ်လုံးသတင်းအချက်အလက်အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းအမျိုးအစားသို့ကျရောက်အဖြစ်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ယူနိုင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအပြန်အလှန်စနစ်များအတွက်အလားအလာအသုံးဝင်သောအခန်းကဏ္ဍပေးသည်။ ထို့ကြောင့်ဥပမာ, အွန်လိုင်းအကူအညီနဲ့စနစ်များအသုံးဝင်အလားအလာပိုပြီးတရားဝင်ရှာဖွေရေးသို့မဟုတ် menu က system ကိုထက် "friendlier" interface ကိုပေးအသုံးပြုသူများလိုအပ်ကြောင်းအကူအညီများ၏ဧရိယာကိုသိရှိနိုင်ဖို့ chatbot နည်းစနစ် employ နိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုမှုဒီစီကြောင်းမှတ်သား "အမှန်တကယ်အသုံးဝင်ကွန်ပျူတာနည်းလမ်းများ" ကို Weizenbaum ရဲ့ "ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း ... curios အဘို့သိုထား" မှ chatbot နည်းပညာရွေ့လျား၏အလားအလာကိုရရှိထားပါသည်။ တိုးတက်ရေး အဆိုပါဂန္သမိုင်းဝင်အစောပိုင်း chatbots Eliza (1966) နှင့် PARRY (1972) ။     များမှာ ပိုများသောမကြာသေးမီထင်ရှားတဲ့အစီအစဉ်များ A.L.I.C.E. , Jabberwacky နှင့် D.U.D.E (Agency Nationale de la Recherche နှင့် CNRS 2006) တို့ပါဝင်သည်။ Eliza နဲ့ PARRY ရိုက်ထည့်စကားပြောဆိုမှုတူအောင်ဖန်တီးရန်သီးသန့်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်စဉ်တွင်, များစွာသော chatbots ယခုကဲ့သို့သောဂိမ်းများနှင့်ဝဘ်ရှာဖွေနေစွမ်းရည်အဖြစ်အလုပ်လုပ်တဲ့အင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်။ 1984 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးစာအုပ်စွပ်စွဲ chatbot Racter (ဖြန့်ချိအဖြစ် program ကိုနိုင်အောင်လုပ်နေတာနိုင်စွမ်းပါပြီမဟုတ်ဘူးသော်လည်း) ကရေးသား, ထုတ်ဝေခဲ့သည်။  ရဲရဲ့မုတ်ဆိတ်တစ်ဝက်ဆောက်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုချေါသ
AI အသုတေသနတစ်ခုမှာဆိုင်တဲ့လယ်ပြင်ကိုသဘာဝဘာသာစကားအပြောင်းအလဲနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်, အားနည်း AI အလယ်ကွင်းလိုအပ်သောကျဉ်းမြောင်းတဲ့ function ကိုများအတွက်အထူးဖန်တီးအထူးပြုဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ်ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကား employ ။ ဥပမာအားဖြင့်, A.L.I.C.E. တစ်ဦးစကားပြောဆိုမှုအေးဂျင့်အဖြစ်က၎င်း၏ function ကိုမှတိကျသောအရာ AIML လို့ခေါ်တဲ့ markup ဘာသာစကား, ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်ပြီးကတည်းကဒါ Alicebots ခေါ်အမျိုးမျိုးကိုအခြား developer များကမွေးစားခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ A.L.I.C.E. နေဆဲသက်သက်သာမဆိုဆင်ခြင်ခြင်းစွမ်းရည်မရှိဘဲနည်းစနစ်ကိုက်ညီပုံစံပေါ်တွင်အခြေခံသည် Eliza 1966 ခုနှစ်ဒီနောက်ကျောကို အသုံးပြု. ခဲ့သည်တူညီတဲ့ technique ကို sapience နှင့်ယုတ္တိဆင်ခြင်ခြင်းအရည်အချင်းများလိုအပ်ပေလိမ့်မည်သည့်ခိုင်မာတဲ့ AI အ, မဟုတျပါဘူး။
Jabberwacky မဟုတ်ဘဲအငြိမ်ဒေတာဘေ့စထဲကနေမောင်းထုတ်ခံခြင်းထက်, Real-time အသုံးပြုသူ interaction ကအပေါ်အခြေခံပြီးအသစ်သောတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အခြေအနေတွင်သိလာကြတယ်။ တချို့ကပိုပြီးမကြာသေးမီ chatbots ကိုလည်းကျင်းပတစ်ခုချင်းစီကိုစကားပြောဆိုမှုအပေါ်အခြေခံပြီးဆကျသှယျဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ပိုကောင်းအောင်ကြောင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် algorithms နှင့်အတူသင်ယူ Real-time ပေါင်းစပ်။ သို့တိုင်မရှိသယေဘုယျရည်ရွယ်ချက်စကားပြောဆိုမှုအတုထောက်လှမ်းရေးလက်ရှိဖြစ်တယ်, တချို့ software ကို developer များလက်တွေ့ရှုထောင့်, သတင်းအချက်အလက်ရယူခြင်းမှအာရုံစိုက်ပါ။
Chatbot ပြိုင်ပွဲဟာကျူရင်စမ်းသပ်မှုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတိကျတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အာရုံစိုက်ပါ။ နှစ်ဦးကယင်းသို့နှစ်စဉ်ပြိုင်ပွဲဟာ Loebner ဆုကိုနှင့် The Chatterbox စိန်ခေါ်မှု (အော့ဖ်လိုင်း 2015 ကတည်းကပစ္စည်းများနေဆဲက်ဘ်ဆိုက်မော်ကွန်းတိုက်ကနေရှာတွေ့နိုင်ပါသည်) ဖြစ်ကြသည်။  Forrester (2015) အရ, AI အဆယ်စုနှစ်၏အဆုံးအားဖြင့်အမေရိကန်အလုပ်အကိုင် 16 ရာခိုင်နှုန်းကိုအစားထိုးပါလိမ့်မယ်။  Chatbots ထိုကဲ့သို့သောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအရောင်းနှင့်ထုတ်ကုန်ပညာရေးအဖြစ် applications များများတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ သို့သော် 2015 ခုနှစ်တွင် Narrative Science အားဖြင့်ကောက်ယူလေ့လာမှုတစ်ခုကသူတို့ဖြေဆိုသူ 80 ရာခိုင်နှုန်းက AI အလုပျသမားစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဖန်တီးယုံကြည်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ [ကိုးကားလိုအပ်] လြှောကျလှာ ကိုလည်းကြည့်ပါ: Virtual လက်ထောက် Facebook မှာ Messenger ကိုမတ်လ 2018 အပေါ် running Aeromexico လေကြောင်းလိုင်း chatbot messaging app များ ကုမ္ပဏီအများအပြား '' chatbots WhatsApp ကို, LiveChat, Kik, ပျင်းရိ, လိုင်း, ကြေးနန်း, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးကို SMS မှတဆင့်  (2013 ကတည်းက) WeChat, (2016 ကတည်းက) Facebook မှာ Messenger ကိုများကဲ့သို့စာတိုပေးပို့ရေး apps များအပေါ်ကို run ။ သူတို့ဟာ B2C ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအရောင်းနှင့်ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးများအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ 
2016 ခုနှစ်တွင် Facebook က Messenger ကို developer များဟာသူတို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ် chatbots နေရာခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ပထမခြောက်လအတွက် Messenger ကိုဖန်တီး 30000 bot တွေဟာစက်တင်ဘာ 2017  တို့က 100,000 မှထရှိခဲ့သည် စက်တင်ဘာလ 2017 ကတည်းက, ဒီကိုလည်း WhatsApp ကိုအပေါ်တစ်ဦးရှေ့ပြေးအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ လေကြောင်းလိုင်း KLM နှင့်Aeroméxicoနှစ်ခုစလုံးစမ်းသပ်ခြင်းအတွက်၎င်းတို့၏ပါဝင်မှုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်;     နှစ်ဦးစလုံးလေကြောင်းလိုင်းများယခင်က Facebook မှာ Messenger ကို platform ပေါ်တွင်ဖောက်သည်န်ဆောင်မှုများစတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ bot တွေဟာများသောအားဖြင့်အသုံးပြုသူရဲ့အဆက်အသွယ်တစ်ဦးအဖြစ်ပေါ်လာပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အုပ်စုတစ်စုချက်တင်အတွက်သင်တန်းသားများကိုအဖွဈဆောငျရှကျနိုငျသညျ။ အတော်များများကဘဏ်နှင့်အာမခံ, မီဒီယာနှင့် e-commerce ကိုကုမ္ပဏီများ, လေကြောင်းလိုင်းများနှင့်ဟိုတယ်လုပ်ငန်း, လက်လီရောင်းသူများ, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူ, အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့်စားသောက်ဆိုင်ချည်နှောင်ရိုးရှင်းသောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန် chatbots ကိုအသုံးပြုကြဖောက်သည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်  မြှင့်တင်ရေးအဘို့နှင့်အပိုဆောင်းကမ်းလှမ်းရန် သူတို့ထံမှအမိန့်နည်းလမ်းများ။   တစ်ဦးက 2017 လေ့လာမှုကုမ္ပဏီတွေရဲ့ 4% chatbots ကိုအသုံးပြုပြသသည်။  တစ်ဦး 2016 လေ့လာမှု၏အဆိုအရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရဲ့ 80% ကိုသူတို့ 2020 တဦးတည်း  ရှိသည်ဖို့ရည်ရွယ်ဟုဆိုသည် ကုမ္ပဏီ apps များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်chatbots ၏ယခင်အစဉ်အဆက်ဥပမာကုမ္ပဏီကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာစည်းဝေး   2008 ခုနှစ်ပွဲထွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော Alaska လေကြောင်းလိုင်းထံမှ Jenn  သို့မဟုတ် 2011 ခုနှစ်စတင်ရာ Expedia ရဲ့ကို virtual ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအေးဂျင့်ကိုမေး chatbots ၏အသစ်များမျိုးဆက်အလားအလာစိန်ဝယ်လက်မှသတင်းအချက်အလက်များကိုနယူးယောက်စီးတီး-based e-commerce ကုမ္ပဏီရှားပါး Carat နေဖြင့်ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 မှာစတင်မိတ်ဆက်, IBM က Watson-powered "Rocky" ပါဝင်သည်။   ကုမ္ပဏီပြည်တွင်းရေးပလက်ဖောင်း အခြားကုမ္ပဏီများသူတို့ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှု, လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အဘို့, ဒါမှမဟုတ်ပင်အင်တာနက်ကို-of-အရာ (IoT) စီမံကိန်းများတွင်ဥပမာအားဖြင့်, ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်း chatbots သုံးနိုငျသညျ့နညျးလမျးကိုစူးစမ်း။ Overstock.com, တဦးတည်းအဘို့, သတင်းများအရတစ်ဦးနေမကောင်းခွင့်အဘို့တောင်းဆိုလာသောအခါအချို့သောရိုးရှင်းသောသေးအချိန်ကုန်ဖြစ်စဉ်များအလိုအလျောက်မှ Mila အမည်ရှိ chatbot စတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။  ထိုကဲ့သို့သော Lloyd ဘဏ်လုပ်ငန်းအုပ်စု, စကော့တလန်တော်ဝင်ဘဏ်, Renault နှင့်Citroënကဲ့သို့သောအခြားကြီးမားသောကုမ္ပဏီများသည်ယခုအဆက်အသွယ်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအချက်ပေးသညျလူသားတို့နှင့်အတူအစားခေါ်ဆိုခစင်တာများ၏အလိုအလျောက်အွန်လိုင်းလက်ထောက်အသုံးပြုနေသည်။ တစ်ဦးက SaaS chatbot စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဂေဟစနစ်တဖြည်းဖြည်း Zuckerberg ဟာ Messenger ကို app ကိုသို့ chatbots ခွင့်ပြုမယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြသသည့်အခါ F8 ညီလာခံကတည်းကကြီးထွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။  ကစားစရာအရုပ် Chatbots လည်းအဓိကအားဖြင့်ယင်းသို့ကစားစရာအဖြစ်ကွန်ပျူတာရည်ရွယ်မဟုတ် devices များသို့ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။  မင်္ဂလာပါ Barbie ယခင်ကသားသမီးတို့အဘို့စမတ်ဖုန်း-based ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးအကွာအဝေးများအတွက် chatbot ကိုအသုံးပြုသည့်ကုမ္ပဏီ ToyTalk  တို့ကထောက်ပံ့ပေးမယ့် chatbot ကိုအသုံးပြုသောအရုပ်တစ်ခုကအင်တာနက်-connected ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။  ဤရွေ့ကားဇာတ်ကောင် '' အပြုအမူတွေသက်ရောက်အတွက်အထူးသဖြင့်ဇာတ်ကောင်အတုယူပြီး storyline ထုတ်လုပ်ကြောင်းချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အားဖြင့်သတ်နေကြသည်။  IBM ရဲ့ကွန်ပြူတာ Watson ပညာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကလေးများနှင့်အတူဆက်ဆံဖို့ရည်ရွယ်ထိုကဲ့သို့သော CogniToys အဖြစ်ကုမ္ပဏီများအတွက် chatbot-based ပညာရေးဆိုင်ရာကစားစရာ  များအတွက်အခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။  Chatbot ဖန်တီးမှု တစ်ဦး chatbot အတွက်အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်သည်တစ်ဦးဝဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုသို့မဟုတ်မိုဘိုင်း app ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆင်တူတဲ့ပုံစံအောက်ပါအတိုင်း။ ဒါဟာဒီဇိုင်း, အဆောက်အဦး, Analytics မှနဲ့ Maintenance သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။  ပုံစံ အဆိုပါ chatbot ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသူနှင့် chatbot အကြားအပြန်အလှန်သတ်မှတ်ပါတယ်သောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။  အဆိုပါ chatbot ဒီဇိုင်နာသည်အသုံးပြုသူများကိုမေးမြန်းပါလိမ့်မည်သောမေးခွန်းများကိုနှင့်ခြုံငုံအပြန်အလှန်အဆိုပါ chatbot ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။   ဒါဟာစကားပြောဆိုမှုဒီဇိုင်းအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်အဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အလို့ငှာ, ဒီဇိုင်နာများချက်ချင်း preview ကို, အဖွဲ့ကပူးပေါင်းနှင့်ဗီဒီယိုပို့ကုန်များအတွက်ခွင့်ပြုပါအကြောင်း, ဆက်ကပ်အပ်နှံထား chatbot ဒီဇိုင်းရေးကိရိယာများကိုသုံးနိုင်သည်။  အဆိုပါ chatbot ဒီဇိုင်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုလည်းအသုံးပြုသူစမ်းသပ်ခြင်းတဝိုက်ဗဟိုပြုနေသည်။ အသုံးပြုသူစမ်းသပ်ခြင်းသော graphical interface တွေကိုများ၏အသုံးပြုသူစမ်းသပ်ခြင်းကိုလမ်းပြသောတူညီသောအခြေခံမူအောက်ပါဖျော်ဖြေနိုင်ပါသည်။
 အဆောက်အဦး အသုံးပြုသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်မှန်ကန်သောအဖြေကိုထုတ်လုပ်: တစ် chatbot တည်ဆောက်ခြင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ခုကိုအဓိကတာဝန်များကိုသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးတာဝန်အသုံးပြုသူ input ကိုနားလည်သဘောပေါက်ပါဝငျသညျ။ စနစ်တကျအခမဲ့စာသားကို form မှာအသုံးပြုသူတစ်ဦး input ကိုနားလည်ရန်အလို့ငှာတစ်ဦးသဘာဘာသာစကားများထုတ်ယူခြင်း Engine ကိုသုံးနိုင်တယ်။  ဒုတိယ task က chatbot generate လိမ့်မည်ဟုတုံ့ပြန်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုများပါဝင်လိမ့်မည်။ analytics အဆိုပါ chatbot ၏အသုံးပြုမှုအလားအလာကိုအားနည်းချက်တွေကိုသို့မဟုတ်ပြဿနာများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ရန်အတွက်စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစနောက်ဆုံးအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေနိုင်သောအသုံးဝင်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးနိုင်ပါသည်။  ကို Maintenance ပြောင်းလဲနေတဲ့ကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူမြန်ဆန်ဖို့ chatbots တက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်, ရိုးရာ chatbot ဖှံ့ဖွိုးတိုးတပလက်ဖောင်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်သည်။ ဒါကတစ်ဦးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော service provider က၏ပုံစံသို့မဟုတ် In-အိမ်သူအိမ်သား chatbot လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့၏ပုံစံအတွက်ပိုကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေအဘို့ဖွဈနိုငျပါတယျဖြစ်စေ။  ဤအမှုကုန်ကျစရိတ်ပပျောက်စေရန်, အချို့စတင်အထူးသဖြင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု applications များအတွက်, Self-သင်ယူခြင်း chatbots ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကို Artificial Intelligence နှင့်အတူစမ်းသပ်နေကြသည်။ Chatbot ဖှံ့ဖွိုးတိုးတပလက်ဖောင်း အဆောက်အဦ, စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်စေလွှတ် chatbots တစ်ဝန်ဆောင်မှု (PaaS) ထိုသို့သော Yekaliva, Oracle ကမိုးတိမ်ပလက်ဖောင်း, SnatchBot  နှင့် IBM က Watson အဖြစ်ပံ့ပိုးပေးအဖြစ်မိုဃ်းတိမ်ကိုပလက်ဖောင်းကကမ်းလှမ်းသောမိုဃ်းတိမ်ကိုအခြေခံပြီး chatbot ဖှံ့ဖွိုးတိုးတပလက်ဖောင်း  ရက်နေ့မှာလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်၏လုပ်ငန်းစဉ်။ [50 ]   ဤရွေ့ကား, မိုဃ်းတိမ်ပလက်ဖောင်း chatbot ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်သဘာဝဘာသာစကားများထုတ်ယူခြင်း, Artificial Intelligence နှင့်မိုဘိုင်း backend သည်။ APIs များကို ထိုကဲ့သို့သော AARC အဖြစ်သင့်ကိုယ်ပိုင် chatbots, တည်ဆောက်ခြင်းများအတွက်ရရှိနိုင်အများအပြားတွင် API ရှိပါတယ်။  malicious အသုံးပြုမှုmalicious chatbots မကြာခဏထိုကဲ့သို့သောဘဏ်အကောင့်နံပါတ်များအဖြစ်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်သို့လူတွေကိုသွေးဆောင်ဖို့လူ့အပြုအမူနှင့်ပြောဆိုမှုများန်းမှာသို့မဟုတ်အသုံးပြုပုံ spam များကိုနှင့်ကြော်ငြာများနှင့်အတူချက်တင်ခန်းဖြည့်ရန်အသုံးပြုကြသည်။ သူတို့ကအများအား Yahoo! အပေါ်တွေ့ရှိ Messenger ကို, Windows Live Messenger ကို, AOL Instant Messenger ကိုများနှင့်အခြားလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ protocols များ။ ထို့အပြင်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ service ၏ website တွင်အတုပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာများတွင်အသုံးပြုနေတဲ့ chatbot တစ်ထုတ်ဝေအစီရင်ခံစာရှိခဲ့သည်။ 
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Chatbot&oldid=425849" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈၊ ၀၄:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။